Vuselela Ikhadi Lezithombe zevidiyo
Umbuzo Vuselela Ikhadi Lezithombe zevidiyo
izinyanga 2 2 Sekwedlule amaviki #1477 by tomtobin
Nginentshisekelo yokuthuthukisa ikhadi lami lesithombe kusuka kulokho enginakho njengamanje okungabizwa ngentengo ephansi ($ 250- $ 350).
Ukusethwa kwamanje kungokulandelayo:
Idivayisi: Ideskithophu - BVSMMEP
Iprosesa: Intel (R) Core ™ i7 4790 CPU 3.60GHz 3.60 GHz
Kufakiwe Memory (RAM): 16.0 GB
Uhlobo Lwesistimu: I-64-Bit Operating System x 64 processor based
Ipeni nokuthinta: Akukho peni noma ukuthinta okutholakalayo
I-Windows Edition: IWindows 10
Ikhadi Lomfanekiso: NVIDIA GeForce GT 705.0
Angazi lutho ngamakhadi wemifanekiso ngaphandle kwamakhadi we-NVIDIA abonakala egcwele kakhulu emakethe.
I ngokuyendiza i-FXE Steam (kodwa yazi i-MS FS 2020 ikhona) futhi ngibheke eDSL ukuzama; Ngivame ukundiza amahora ambalwa ngesonto futhi anginawo umdlalo wokudlala.
Futhi ngiyocela ukuthi iNdodana yami kwezomthetho iguqule ikhadi lami ukuze likunikeze umbono (ngithemba) ngamakhono ami obuchwepheshe ekhompyuter (noma ukuntuleka kwalo).
izinyanga 2 2 Sekwedlule amaviki - izinyanga 2 2 Sekwedlule amaviki #1478 by i-hankal
INividia 1080 (hhayi i-1080ti .... iyabiza kakhulu)
Ikhadi elihle kakhulu. Ukuvuselelwa kabusha kulungile. Esigabeni sakho sentengo.
Ukuhlela kokugcina: izinyanga ezingu-2 amasonto angu-2 adlule i-hankal. Isizathu: engeza inothi
izinyanga 2 2 Sekwedlule amaviki #1480 by bthiago
Engikwesabayo ukuthi i-motherboard yakho isekela iKhadi le-Vid elinjalo. Angihloniphi ngokweqiniso njengama-Dell PC. Bengine-2 noma i-3 futhi ngaso sonke isikhathi ngangithuthukisa Amakhadi e-Vid, ngangithola ukukhohlakala.
Ngakha okwami ​​kusukela manje.
Isikhathi ukudala page: 0.151 imizuzwana